Tansaaniya ayaa aad u doonaysa inay aragto Bilowga Bandhigga Dalxiiska Gobolka ee ugu horreeya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » Tansaaniya ayaa aad u doonaysa inay aragto Bilowga Bandhigga Dalxiiska Gobolka ee ugu horreeya
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Tanzania waxay diyaar u tahay bandhigga dalxiiska gobolka EAC
Bandhiggii ugu horreeyey uguna horreeyay ee dalxiiska gobolka ee 6da dal ee xubnaha ka ah Bulshada Bariga Afrika (EAC) ayaa lagu wadaa inuu dhaco horaanta bisha Oktoobar. Waxaa loo sameeyay si loo soo jiito shirkadaha dalxiiska iyo siyaasad -dejiyeyaasha guud ahaan gobolka.
Waxaa loogu magac daray Bandhigga Dalxiiska Gobolka Bariga Afrika (EARTE) 2021, waxaa loo qorsheeyay inuu furmo Oktoobar 9 illaa 16.
Dhacdadan ayaa soo jiidatay ciyaartoy muhiim u ah dalxiiska oo ka socda waddamada xubnaha ka ah EAC.
EARTE 2021 waa bandhiggii ugu horreeyay ee dalxiiska gobolka ee ka dhaca Bariga Afrika, oo lagu beegsanayo in lagu dhiso barnaamij wadajir ah oo kulminaya 6da dal ee xubnaha ka ah si loo abuuro hindisaha dalxiiska gobolka.
Ka -qaybgalayaasha EARTE waxaa ku jira iibsadayaal iyo warbaahin caalami ah oo martigeliyey kuwaas oo ka qayb qaadan doona sidii loo soo bandhigi lahaa goobaha dalxiiska ee hodanka ah ee laga heli karo Bariga Afrika dawlad kasta.
Bandhigga waxaa ku xigi doona safar isbarasho ah oo loogu talagalay iibsadayaasha iyo warbaahinta caalamiga ah ee martigeliyay qaar ka mid ah goobaha dalxiiska ee caanka ah ee Tansaaniya iyo EAC oo ka kooban Badweynta Hindiya iyo xeebaha harada, duurjoogta, quruxda muuqaalka leh, goobaha taariikhiga ah, iyo hidaha dhaqanka hodanka ah.
Mawduuca bandhigga soo socda ayaa ah “Dhiirrigelinta Dalxiiska Adkeysiga u leh Horumarinta Dhaqaale-Bulsheed Loo Dhan Yahay.” Mawduuca waxaa loogu talagalay in lagu wargeliyo baahida loo qabo in la horumariyo oo dib loo habeeyo waaxda dalxiiska si joogto ah si loo yareeyo saamaynta ay qaybta ku leedahay masiibada COVID-19.
Gobolka EAC wuxuu lumiyay ku dhawaad ​​70 boqolkiiba soogalootiga caalamiga ah ee yimid 2020, oo ay weheliso khasaaro aad u weyn xagga dakhliga dalxiiska iyo shaqooyinka la xiriira dalxiiska, ayuu yiri EAC Xoghayaha Guud, Peter Mathuki. Ilaalinta duurjoogta ee gobolka ayaa la kulantay dharbaaxo weyn oo ka timid masiibada iyada oo lumisay dakhligii ilaalinta, taas oo inta badan ka dhalata dalxiisayaasha booqda aagagga la ilaaliyo iyo ilaalinta duurjoogta ee gobolka oo dhan.
Waaxda dalxiiska waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan iskaashiga EAC, taas oo ay ugu wacan tahay kaalintii ay ka geysatay dhaqaalaha Dalalka Iskaashiga la leh GDP (qiyaastii 10%), dakhliga dhoofinta (17%), iyo shaqooyinka (qiyaastii 7% ). Saameyntiisa badan iyo isku xirnaanta qeybaha kale ee muhiimka u ah is -dhexgalkeeda sida beeraha, gaadiidka, iyo wax -soo -saarka ayaa aad u weyn.
Qodobka 115 ee Heshiiska EAC wuxuu siinayaa iskaashi qaybta dalxiiska, halkaas oo Dawladaha Shuraakada ahi ay ballanqaadaan inay horumariyaan wadar wadajir ah oo isku duuban si kor loogu qaado loona suuqgeeyo dalxiiska tayada leh gudaha iyo bulshada dhexdeeda.
Gaar ahaan, waxay ku hawlan yihiin isku -dubaridka siyaasadaha warshadaha dalxiiska, jaangooynta kala -soocidda hoteelka, iyo horumarinta istiraatiijiyad gobol oo loogu talagalay dhiirrigelinta dalxiiska, halkaas oo dadaallada shaqsiyeed lagu xoojiyo tallaabada gobolka.
Wadamada xubnaha ka ah EAC waxay kor u qaadayeen dalxiiska gobolka carwooyinka dalxiiska caalamiga ah, oo ay ku jiraan Suuqa Socdaalka Adduunka (London) iyo Bourse Tourism Bourse (ITB) ee Berlin.
Bandhigga Dalxiiska ee Gobolka waxaa markaas martigelin doona Waddamada Iskaashiga si ku -meel -gaar ah.
Intii lagu guda jiray Kulankeedii caadiga ahaa ee la qabtay July 15, 2021, Golaha Waaxda EAC ee Maareynta Dalxiiska iyo Maareynta Duurjoogta ayaa go'aansaday in Jamhuuriyadda Midowday Tansaaniya waa inay martigelisaa Bandhigga Dalxiiska Gobolka 1aad ee EAC ee Caruusha Oktoobar 2021. Doorashada Arusha - xarunta dalxiiska Tansaaniya iyo magaalada safari - ayaa loo sameeyay si loo fududeeyo marin -u -helidda ka -qaybgalayaasha dhammaan Waddamada Iskaashiga.
Ujeeddada bandhigga ayaa ah in kor loo qaado EAC oo ah hal dalxiis oo kaliya, in la siiyo barxad ay ku hawlgalaan adeegyada bixiyeyaasha adeegga dalxiiska (B2B), iyo in la abuuro wacyigelin ku saabsan dalxiiska.
Dhacdadu waxay ka koobnaan doontaa bandhigyo ay bixiyaan bixiyeyaasha adeegga dalxiiska, isku xirka xawaaraha iyo shirarka B2B, iyo seminaarro ku saabsan dalxiiska iyo dulucda duurjoogta. Marka la eego qaybta dalxiiska, mawduucyadan hoose waxay ku wareegi doonaan dhinacyo ay ka mid yihiin adkeysiga dalxiiska iyo maaraynta dhibaatooyinka, suuqgeynta dalxiiska dhijitaalka ah, horumarinta baakadaha dalxiiska ee meelo badan loo tago, iyo fursadaha maalgashiga dalxiiska iyo dhiirrigelinta.
Dhinaca kale, mawduucyada hoose ee la xiriira duur-joogta ayaa waxaa ka mid noqon doona La-dagaallanka Ugaadhsiga iyo Ganacsiga Duurjoogta Sharci-darrada ah iyo qiimaha dhaqaale ee duur-joogta gobolka.
Midda ugu muhiimsan sidoo kale, bandhiggu wuxuu xoojin doonaa dalxiiska gobollada dhexdiisa marka lagu daro dalxiiska caalamiga ah iyada oo kor loo qaadayo bixinta wax soo saarka dalxiiska ee muwaadiniinta EAC. Tani waxay xoojin doontaa dadaalladii hore sida go'aankii Golaha Wasiirrada ee Dawladaha Shuraakada ahi ay siiyaan heerar mudnaan leh muwaadiniinta soo booqda goobaha dalxiiska ee gobolka dhexdiisa oo leh qaddarro khuseeya muwaadiniinta.